ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G4 အတွက် LG G2 port ရှိပြီးဖြစ်သည် Androidsis
Francisco Ruiz | | LG, ရွမ်
အောက်ပါစာမူကိုအသုံးပြုသူအားလုံးအတွက်ရည်ရွယ်ပါသည် LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ်လ်, ထိုအဖြစ်လူသိများမော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် D802ငါအကြံပြုဖို့သွားနေပါတယ် LG G4 အတွက် LG G2 ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ရာ port LG G4.0 ၏ပုံမှန် UX4interface အသစ်ပါ ၀ င်သည့် port တစ်ခုနှင့် LG G4 မယူဆောင်နိုင်သောကောင်းမွန်သည့်ထပ်ပေါင်းထည့်သွင်းထားသော application များနှင့်လုပ်ဆောင်ချက်များသည်
ယုတ္တိတန်ပုံအပြင်အခြားသော၎င်းကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သောဖိုင်များအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့ပူးတွဲပါလိမ့်မည် LG G4 ၏စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် Rom Lollipop ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းပြီးမယုံနိုင်လောက်တဲ့ LG G2 မှာ Rom Leptip လုပ်ငန်းစဉ်ကိုသင် Stock Lollipop Rom မှာဖြစ်စေ၊ AOSP Rom ဖြစ်စေ၊ Stock Kit Kat သို့မဟုတ် Jelly Bean ရှိမရှိကိုတစ်ဆင့်ချင်းရှင်းပြသွားပါမည်။
1 ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G4 အတွက် LG G2 ၏ Rom ChelozTeam ဆိပ်ကမ်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
4 Rom မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်နည်းလမ်း
ကျွန်ုပ်တို့၏ LG G4 အတွက် LG G2 ၏ Rom ChelozTeam ဆိပ်ကမ်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများ
အပြည့်အဝ deodexed rom
Dual Window နှင့် Mini View ကိုအသုံးပြုထားသည်
အသုံးပြုသူ Multi- အသုံးပြုသူ
LG G4 ၏စုစုပေါင်းအသွင်အပြင်
ကုလားကာပေါ်ရှိ icon များ 6
LG G Flex2မျက်နှာပြင်သော့ခတ်သက်ရောက်မှု
Plug & အလုပ်လုပ်သည်
LG G4 ကင်မရာ
မူရင်း LG G2 ကင်မရာ
ဖြည့်ဆည်းရန်လိုအပ်ချက်များသည်အမြဲတမ်းကဲ့သို့ပင်၊ LG G2 နိုင်ငံတကာမော်ဒယ် D802 အရာလည်းဖြစ်ရမည် အမြစ်တွယ် နှင့်အပိုင်၌တည်၏ နောက်ဆုံး Recovery TWRP.
ဒါတွေအားလုံးအပြင်၊ သင့်မှာ backup (သို့) backup လည်းရှိသင့်တယ် nandroid backup ယင်ကောင်များသည်လက်ရှိလည်ပတ်နေသောစနစ်တစ်ခုလုံး၏ backup EFS ဖိုင်တွဲ y ကျွန်ုပ်တို့၏လျှောက်လွှာများနှင့်အချက်အလက်အားလုံးကိုအရန်ကူးခြင်း.
ဒီကို flash လုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့၏နိုင်ငံတကာ LG G4 ရှိ LG G2 ၏ Rom Portငါတို့သွားရတော့မယ် compressed zip ဖိုင်ကို download လုပ်ရန်လိုအပ်သည် ၎င်းတွင်သင်လိုအပ်သည့်အရာအားလုံးပါဝင်ပြီးဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှန်ကန်သော bootloader နှင့်ပင်သက်ဆိုင်သည်။ သို့မှသာမည်သည့် Android ဗားရှင်းတွင်မဆို၎င်းကို flash လုပ်နိုင်သည်။ Kit Kat, Jelly Bean, Lollipop သို့မဟုတ် AOSP Rom ။
မော်ဒယ်လ်ကဲ့သို့ Terminal အသုံးပြုသူများ D800, D805 o D806ဒီစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထောက်ပံ့ပေးသော LG G4 ၏ Rom portငါဖြတ်သန်းသွားရန်သင့်အားအကြံပေးသည် ၏တရားဝင်ချည်နှောင်ခြင်းကို HTC Mania တွင်တွင်ရှိသည် သင်၏မော်ဒယ်များအရ Rom ထည့်သွင်းမှုအသေးစိတ်အတိအကျနှင့် Rom flashing တွင်လိုက်နာရမည့်အကြံပြုချက်များနှင့်လမ်းညွှန်ချက်များအရသင်ဘယ်မှာရှာနိုင်သည်။
ပြီးရင် zip ကို internal memory or USB OTG သို့ကူးယူပြီးပြီ Rcovery mode မှာပြန်ဖွင့် ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ Rom မှိတ်တုတ်မှိတ်တုတ်ညွှန်ကြားချက်ကိုလိုက်နာပါလိမ့်မယ်:
ရဲ့ option ကိုသွားကြကုန်အံ့ သုတ် y ကျနော်တို့အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်မှလွဲ။ အရာအားလုံးကိုသုတ် USB OTG မှမီးမထိုးပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် USB OTG မှအလင်းပြန်လျှင်၊ အတွင်းပိုင်းမှတ်ဉာဏ်သည်သန့်ရှင်းသောတပ်ဆင်မှုတစ်ခုပြုလုပ်ရန်လည်း format လုပ်နိုင်သည်။
Install option သို့သွားပြီး Rom ၏ zip ကိုရွေးပြီး installation ကိုအတည်ပြုပါ။
Reboot ဖြစ်စဉ်သည်ဆယ်မိနစ်ခန့်ကြာနိုင်သည် ဒါကြောင့်စိတ်ရှည်ပါ၊ Android setup wizard ပေါ်လာတဲ့အခါ၊ ဘာသာစကားနှင့် Wifi၊ Google အကောင့်စသည်တို့ကဲ့သို့သောကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ setting များကိုရွေးချယ်သောအခါအချို့ကိစ္စရပ်များတွင်ရုတ်တရက်ရပ်တန့်သွားသည်၊ Android setting မှပြproblemsနာမရှိဘဲပြင်ဆင်နိုင်သည်ဆိုသောအချက်သည် ပို၍ အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » LG » LG G4 ChelozTeam UX2အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသည့် LG G4.0 သည် Awesome !!
Friend ။ UX4.0 နှင့်အတူထုတ်လွှင့်သော cloudifa Rom သည်တူညီသည်။ ဒါမှမဟုတ်အဆင့်ကမတူရင်တော့သင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ မင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော့်မှာ Cheloz အသင်းကဒီ Rom ပါ။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကချစ်စရာကောင်းနေတုန်းပဲအလျင်အမြန်ပြေးဖို့ကြိုးစားနေကြလို့သိပ်နောက်ကျသွားပြီ။ တူညီသော developer များကအသိအမှတ်ပြုသည်။ အခုငါ Cloudy 3.1 ကိုတစ်နေ့သုံးပြီးအလှအပနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်လုပ်နေပြီ။ သငျသညျ Francisco ကကြိုးစားသင့်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်၏ဆဲလ်ဖုန်းကိုပြန်လည်ရှင်သန်လာသည်။ အားလုံး roms ppr ၏မိခင်ယခုငါမိုဘိုင်းပေါ်အရာအားလုံးကိုတိုက်တွန်း6နာရီလောက်သွားရသောဗီယက်နမ်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှားတစ်ခုရှာဖွေနေသည် မေး။
Francisco ၌သင်သည်နောက်ဆုံးပေါ် Recovery TWRP Bumpeado ရှိရမည်ဟုပြောပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည် kit kat rom ကိုလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာက (သူထံမှသင်ခန်းစာနှင့်အတူ) install လုပ်သော အချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်၌ CWM ရှိသည်။ ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဘာလုပ်သင့်သလဲ မင်္ဂလာပါ
လူများသည်ဤသည် port မဟုတ်ပါ၊ ပြုပြင်ထားသော rom တစ်ခုဖြစ်သည်။ ခေါင်းစဉ်ကိုပြင်ပေးပါ၊
juan David chaparro ဟုသူကပြောသည်
သူငယ်ချင်း။ ငါ့ကိုကူညီပေးပါ။ ရမ်ဟာအရမ်းကောင်းတယ်။ ငါသူနဲ့အတူ ၂ ရက်ကြာနေခဲ့ပြီးပြီ
ငါ bug တစ်ခုပဲတွေ့ပြီ။ အဲဒါကိုဖုန်းခေါ်တဲ့အချိန်မှာကံမကောင်းတာကဖုန်းပြောတာရပ်သွားတယ်လို့ပြောတာပါ။ သူတို့ကငါ့ကိုခေါ်တဲ့အခါမှာအားလုံးအဆင်ပြေသွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ဖုန်းခေါ်တာနဲ့လုပ်နေတာကိုခေါ်လိုက်တာကအရမ်းရှုပ်ထွေးတယ်
juan david chaparro သို့ပြန်သွားရန်
Nacho Garcia Colombo ဟုသူကပြောသည်
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ။ အရမ်းကောင်းတယ်၊ ဒါပေမယ့် Rom နဲ့တခြားသူတွေကို flash လုပ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ mobile network ကငါ့ကိုမဖမ်းဘူးဆိုတာမှတ်ချက်ပေးချင်တယ်။ သင်အမှားပါလိမ့်မယ်အဘယ်အရာကိုငါသိ၏
Nacho garcia colombo အားပြန်ပြောပါ
ယခုအချိန်ထိအကောင်းဆုံး rom သည် blitz 3.3 ဖြစ်သည်
မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ rom အား lg g flex d950 သို့ထည့်နိုင်သလားသိလိုသည်
Hearthstone Warcraft ၏သူရဲကောင်းများသည် Tavern Brawls၊ သူရဲကောင်းအသစ်များနှင့်အခြားအရာများနှင့်အတူ Update အသစ်တစ်ခုရရှိသည်